Obodo kachasị mma na Andalusia: Site na Cazorla ruo Frigiliana | Njem akụkọ
Louis Martinez | 21/05/2022 09:00 | España, Nduzi
na obodo kachasị mma na Andalusia A na-ekesa ha na mpaghara asatọ nke obodo a kwụụrụ onwe ya. N'ime nke ọ bụla n'ime ha, e nwere obodo ndị pụtara ìhè maka ihe ncheta ha, maka ọdịdị nke gbara ha gburugburu na maka okporo ụzọ ha dị warara.
Na-ewere ya site na ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ, site na Huelva gaa Almería, ma ọ bụ site n'ebe ugwu ruo na ndịda, site na Córdoba elu Cádiz, mpaghara Andalusian niile na-enye gị ọmarịcha ụlọ ndị kwesịrị ka ị gaa. Otú ọ dị, n'ihi na ọ dị mkpa ka synthesize ha n'ime ole na ole, anyị ga-ewere otu onye si n'ógbè ọ bụla na-atụ aro anyị njem nke ndị kasị mma obodo na Andalusia. Ọ bụrụ na i mee ya, ị gaghị akwa ụta.
4 Zuheros, otu n'ime obodo kachasị mma na Andalusia na Sierra de la Subbética
6 Almonaster na Real
7 Lucainena nke Ụlọ Elu
8 Carmona, onye nnọchiteanya Sevilian n'etiti obodo ndị mara mma na Andalusia
Ụlọ ndị a na-ahụkarị nke Setenil de las Bodegas
N'ezie, ị hụla foto obodo ndị ọcha a na mpaghara Cádiz ma ọ bụ ị nwere ike ịga leta ya na-adọrọ mmasị site na ọdịdị mara mma nke akwa ime obodo ya. Nke a, nke ekwuputara na mgbagwoju anya akụkọ ihe mere eme, bụ ụlọ ya dị n'okpuru nnukwu nkume na-achị obodo ahụ.
Otú ọ dị, ndị a abụghị ụlọ ọgba ndị a pịrị apị n'ime nkume, kama e kere ya site na imechi oghere ọ na-enye. Ọ bụ ihe a na-akpọ ndo n'okpuru nkume na mmalite ya laa azụ n'oge ochie. Mana, n'ọnọdụ ọ bụla, ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na Setenil.
Ọ dị mma bụ gị ụlọ, Nasrid e wusiri ike na narị afọ nke XNUMX nwere mgbidi karịrị narị mita ise na ụlọ elu iri anọ nke ka nwere akụkụ nke ndị bi na ya. Ọzọkwa, ọ mara mma Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Anyị, nke na-ejikọta ụdị Gothic na Mudejar ruo n'ókè anyị nwere ike ịgwa gị na ha bụ ụlọ nsọ abụọ dị iche iche.
Tinyere nke a, hermitage dị ka nke San Sebastián, San Benito, Nuestra Señora del Carmen ma ọ bụ Nuestra Señora de la Concepción mezuo ihe nketa okpukperechi nke obodo ahụ. Maka ndị nkịtị, ha na-eme ka ọ pụta ìhè Old Town Hall, na Ụlọ ntụ ọka ma ọ bụ àkwà mmiri nke okporo ụzọ Villa na Triana na Ronda.
Okporo ụzọ Pampaneira
Anyị na-aga ugbu a n'ógbè nke Granada na-enye gị ọmarịcha obodo dị na obi nke Alpujarras, ndịda Sierra Nevada. Ọ bụkwa obodo nwere ụlọ ọcha nke nwere facade jupụtara na ifuru na okporo ámá ndị nwere warara. Ma, ihe ga-achọsi ike karị ga-abụ nke gị tinaos, okporo ụzọ kpuchiri ekpuchi nke na-esi n'otu akụkụ nke okporo ámá gaa n'ọzọ na nke ụlọ dị na ya.
N'otu aka ahụ, site na njem ya García Lorca ị nwere ọmarịcha echiche gbasara mpaghara ahụ dum. Ma ị nwere ike ịmalite nleta gị site na ogige nnwere onwe, olee ebe Holy Cross Church, ụlọ nsọ narị afọ nke XNUMX n'ime nke ị ga-ahụ nnukwu ụlọ mkpuchi Mudejar dị egwu. Ị nwekwara ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ngwaahịa ndị sitere na mpaghara ahụ, dịka akwa akwa. Na, ezigbo nso, n'okpuru isi iyi Cerrillo, bụ akwa akwa Arab ochie.
Mana, ebe ị nọ na Pampaneira, were ohere ahụ mee ụfọdụ Ụzọ njem na Sierra Nevada. Na Plaza de la Libertad n'onwe ya ị ga-ahụ ozi gbasara ha. Anyị na-akwado onye na-erute Osimiri Poqueira, ebe ị nwere ike igwu mmiri n'oge okpomọkụ, na nke na-aga n'obodo ukwu. Bubion y Capileira, Villalọ abụọ ọzọ sokwa n'ime obodo mara mma na Andalusia.
Echiche nke Cazorla, otu n'ime obodo mara mma na Andalusia
Dị na a eke ogige nke ọ na-enye aha ya, n'ugwu nke n'ógbè Jaén, Cazorla bụ ihe ịtụnanya ọzọ nke Andalusia. Ọ na-achị ya Ụlọ nke Yedra, ebe e wusiri ike nke Ndị Kraịst wuru n'elu nke ochie nke ndị Alakụba malite na narị afọ nke XNUMX. Ọzọkwa, n'ime ị nwere ike ịga na-achọ ịmata ihe Lọ ihe nkiri nke Arts ndị mara mma na Omenala nke Alto Guadalquivir.
O nwekwara akụkọ ifo nke ya: nke tragantia. O kwuru na a kpọchiri adaeze Moorish n’ọgba dị ya nso iji chebe ya ka Ndị Kraịst ghara ịbịarute ya. Otú ọ dị, ha gburu ndị Alakụba nile na ọ dịghị onye napụtara ya. N'ihi nke a, ọ ghọrọ ọkara nwanyị, ọkara agwọ e kere eke nke bi n'ime oghere na-apụta naanị n'abalị San Juan.
Ọ bụghị nanị nnukwu ụlọ dị n'obodo ahụ. Ị nwekwara ike ịhụ mkpọmkpọ ebe nke akụkụ ise ahụ, n'elu Cerro de Salvatierra. Ma mmasị ọzọ bụ Isi mmalite nke Chains, Ụdị Herrerian, na mkpọmkpọ ebe nke Chọọchị Renaissance nke Santa María de Gracia.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ụlọ nsọ, ị kwesịrị ị mara na ụka nke Virgen del Carmen, na njirimara ya ụlọ elu octagonal, na nke San Francisco, yana hermitages nke San Sebastián, San Miguel Arcángel ma ọ bụ Virgen de la Cabeza. Na, n'akụkụ ha, ebe obibi ndị mọnk nke Montesión na ebe obibi ndị nọn nke San Juan de la Penitenciaría. N'ikpeazụ, echefula ịhụ ụlọ nzukọ ochie na Obí eze nke La Merced na La Vicaria.
Zuheros, otu n'ime obodo kachasị mma na Andalusia na Sierra de la Subbética
Zuheros, na nnukwu ụlọ ya
Ka anyị gaa ugbu a n'ógbè nke Córdoba ịgwa gị banyere nke a mara mma obodo, nke bụkwa a ọnụ ụzọ ámá ọgba aghara, kwuputara saịtị nke mmasị omenala ma maka uru ebumpụta ụwa na nke nkà mmụta ihe ochie. Ka ọ dị ugbu a, ọ dịghị ihe na-erughị puku mita atọ ka e debere ya, nke ga-enye gị echiche nke akụkụ ya.
Site na ihe ndị e wetara n'ọgba ahụ, ndị Ihe ngosi ihe ochie nke Zuheros, bụ́ nke na-achọ ịmata ihe abụghị nanị otu n'ime ọnụ ọgụgụ dị nta dị otú ahụ. Na oku Casa Grande, bụ Ụlọ ihe ngosi nka nke nka na omenala Juan Fernández Cruz, nke ọdịdị agbụrụ na nke ahụ ga-enye gị ezi echiche nke ndụ na mpaghara n'ime narị afọ nke XNUMX na XNUMX.
Mana obodo Cordovan nwekwara ochie ụlọ, nke ozu ya dị n'elu ugwu na nke a kwenyere na e wuru ya na narị afọ nke XNUMX n'oge ọchịchị ndị Alakụba. Maka akụkụ ya, ndị Ụka nke ọgwụgwọ Ọ malitere na narị afọ nke XNUMX ma nwee ihe oyiyi nke onye senti na-elekọta obodo.
Okporo ụzọ a na-ahụkarị na Frigiliana
Anyị na-aga Malaga ugbu a Mpaghara Axarquia ịgwa gị maka obodo ọzọ mara mma na Andalusia. Frigiliana ka na-ejigide ya Nhazi ochie nke Arab sitere, nke nwere okporo ámá ndị dị warara, okporo ụzọ na okporo ụzọ ya. Ma, karịa ihe niile, ọ pụtara maka ụlọ ọcha ya mara mma nke e ji okooko osisi chọọ ya mma.
Ị nwekwara ike ịhụ na obodo a dị na Malaga mkpọmkpọ ebe nke ulo ngwere, nke e dere ihe dị ka narị afọ nke itoolu; onye na-achọ ịmata ihe Obí nke ọnụ ọgụgụ nke Frigiliana, mara dị ka El Ingenio na na Renaissance style; nke Nkwụnye ego eze, nke XVIII, ma ọ bụ Obí nke Apero, nke e wuru na XVII, dị ka isi iyi ochie.
Ma, ikekwe, ọ ga-adọrọ mmasị gị karịa Obodo Mudejar. Ma, maka ihe ncheta okpukpe ya, ị nwere chọọchị nke san antonio, wuru na 1676, na Ụlọ ihe nkiri nke Santo Cristo de la Caña ma ọ bụ Ecce-Homo, site na narị afọ nke XNUMX.
Square na Almonaster la Real
Anyị kwagara n'ógbè nke Huelva igosi gị obodo a dị n'etiti Sierra de Aracena na Campo de Andévalo. Nnukwu akara ya bụ ụlọ alakụba, nke e wuru na basilica ochie nke Visigothic sitere na narị afọ nke XNUMX. Kpọwapụtara ihe ncheta mba, ọ dị oke mkpa maka ịbụ naanị otu sitere na oge Andalusian nke echekwara nke ọma kpamkpam n'ime ime obodo.
I kwesịkwara ịga na Almonaster the chọọchị San Martín, nke na-ejikọta ụdị Gothic na Mudejar. Lelee mkpuchi ya Ụdị Manueline, ebe ọ bụ, na-esote nke Olivenza (Badajoz), naanị otu dị na Spain. Ị nwekwara ike ịhụ hermitages nke Nuestro Señor de la Humildad y Paciencia, San Sebastián na Santa Eulalia, yana Roman na Tres Fuentes bridges, foduru nke ụlọ, nke Obí nke Miguel Tenorio nke Castile na Manzano Spa, ugbua na mpụga.
Lucainena nke Ụlọ Elu
Echiche nke Lucainena si Ụlọ Elu
Nke a obere obodo na mpaghara Los Filambres-Tabernas, n'ógbè nke Almería. N'ihi na o nwekwara ụlọ ọcha ndị e ji okooko osisi chọọ ya mma, ma ọ pụtara ìhè karịsịa maka oge gara aga ọ raara nye n'ịgbapụta akụ. N'ezie, ị ka nwere ike ịga leta ozu ya Ngwuputa nchekwa, nke nwere igwe ọkụ calcination ọla asatọ, ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ oloko na ọbụna obere ụlọ ọrụ ọkụ.
N'aka nke ọzọ, na mgbakwunye na ịgagharị n'okporo ámá ya dị warara, ị ga-aga na Lucainena. Ụka nke Nwanyị anyị nke Montesión, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX na-esochi canons neoclassical karịa nke ochie sitere na narị afọ nke XNUMX. Ọ ga-eju gị anya n'ihi na, n'èzí, ọ dị ka ihe nchebe.
Carmona, onye nnọchiteanya Sevilian n'etiti obodo ndị mara mma na Andalusia
Ọnụ ụzọ ámá Cordoba, na Carmona
Anyị na-akwụsị njem anyị nke obodo kacha mma na Andalusia na Seville's Carmona, onye mmalite ya laa azụ, opekata mpe, n'oge Rome. N'ezie, ị ka nwere ike ịhụ a ebe ihe ochie nke ụlọ foduru nke a necropolis, ihe amphitheater, a àkwà mmiri na Site Augusta.
Mana Carmona na-ama jijiji maka ihe nketa ya dị ka obodo ewusiri ike na ọ bụ. Isi ihe dị egwu Ọnụ ụzọ ámá nke Cordoba na Sevilleyana ihe amanye Alcazar del Rey Don Pedro, nke natara aha ya n'aka Pedro I nke Castile, bụ onye nyere iwu ka e wughachi ya na ozu nke ebe nchekwa Muslim ochie. Ị nwere ike ịrahụ ụra n'ime ya, ebe ọ bụ ugbu a ụlọ ndị njem nleta.
Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na obodo Andalusian Obí dị ka nke Marquis de las Torres, nke taa nwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke obodo, nke Aguilars, Don Alonso Bernal Escamilla ma ọ bụ Ruedas. agwa dị iche nwere Ụlọ ihe nkiri Cherry, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX na-esote canons nke eclecticism.
N'ikpeazụ, gbasara ihe nketa okpukperechi nke Carmona, ị nwere oke ọnụ ahịa ụka dị ka nke San Pedro, Santa María de la Asunción, Divino Salvador ma ọ bụ San Bartolomé na hermitages dị ka nke San Mateo ma ọ bụ Nuestra Señora de Gracia. Ị nwekwara ike ịga na ebe obibi ndị nọn nke La Concepción, La Trinidad ma ọ bụ Las Descalzas.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị asatọ nke obodo kachasị mma na Andalusia. Ma, n'ụzọ a na-apụghị izere ezere, anyị ahapụla ndị ọzọ na pipeline. Dịka ọmụmaatụ, Cadiz Castle nke Castellar, nke yiri ka ọ kwụsịrị n'oge, onye Malaga Genalguacil, ya na ọdọ mmiri okike ya, ma ọ bụ Huelva Alaja, nke e kwupụtara na ụlọ ọrụ nkà ihe mere eme na 1982. Ọ́ dịghị amasị gị ịmara obodo ndị a magburu onwe ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Obodo kachasị mma na Andalusia